Ndị mgbasa ozi na-eduzi usoro mgbasa ozi ọchụchọ ekwentị
Nduzi Mgbasa ozi na Mobile
Izu gara aga, mụ na ndị mụrụ m nọrọ oge ụfọdụ, ọ wụrụ m akpata oyi n’ahụ́ mgbe ha gosiri m na ha abụọ na-azụ ekwentị ha na iPhone. Ọ bụ ezie na ha abụọ enweghị nkụda mmụọ n'ịmụta otu esi eji ha, ha gwara m na ọ dị ọnụ ala karịa iPhone 4 karịa ekwentị mkpanaaka. N'ezie, n'ime scoop na nke ahụ bụ na onye na-ahụ maka ekwentị ha na-atụ anya ị nweta ego ọzọ site na smartphone karịa ka ha ga-enweta site na ụdị dị ọnụ ala. Kedu ụzọ ọ bụla, mama m na-anabatala ngwa ahịa ịzụ ahịa na nchọta mpaghara.
Ọ bụ naanị oge tupu ekwentị mkpanaaka na-abaghị uru ma anaghịzi ekesa ya. Nke a ga - enye igwe mmadụ ohere ime nchọta mpaghara na ngwa ịzụ ahịa - na - ebuli elu olu na ewu ewu na mgbasa ozi ọchụchọ mkpanaaka. Ọnụ ọgụgụ ahụ na-eju anya ma ohere dị ugbu a maka ndị na-ere ahịa siri ike iji uru. Ndị mmekọ StartApp na ndị mmepe ngwa iji nyere ha aka ị nweta ego site na ngwa ha na-akwụghị ụgwọ site na iji monetization ọchụchọ wee jikọta ozi a na ndị mgbasa ozi ekwentị kachasị elu
Tags: mobile mgbasa ozimgbasa ozi mgbasa ozimkpanaka ọchụchọ
Tinye Obi Gị na Mmekọrịta Gị